I-11x33 Podcast: IMac yokuqala ene-ARM ngo-2021 | IPhone iindaba
Kubonakala ngathi iminyaka yamarhe kunye nezityholo zokuvuza sele kumbovu ukuqinisekiswa ngazo ukumiliselwa kweMac yokuqala ngenkqubo ye-ARM. Ngaba iya kuba yiMacBook Air? Ngaba kuya kubakho naluphi na utshintsho lwesoftware oluchaphazela i-macOS kunye ne-iPadOS? Konke oku nokunye okuninzi kwipodcast yethu yeveki. Ngaba uza kuyiphosa?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » podcast » 11 × 33 I-Podcast: IMac yokuqala ene-ARM ngo-2021
Isicelo senkxaso sika-Apple sisungula ujongano kunye nemowudi emnyama emva kohlaziyo lwamva nje
Ii -apps ezichasene ne-COVID-19 kunye nengxaki yebhetri